Tag: Dhimasho | Sagal Radio Services
Arday ku geeriyootey waxyaabo qarxa oo ay garaaceen gudaha deegaanka Xeraale
Sagal Radio Services • News Report • March 24, 2013
Laba wiil ayaa ku dhimatay seddex kalena way dhaawacmeen kadib markii ay garaaceen waxyaabo qarxa oo sida la tuhmayo inay miino ahaayeen xalay fiidkii gudaha deegaanka Xeraalle ee gobolka Galgaduud.
Wariye Maxamuud Cabdiraxmaan Beene-beene oo xanuun ugu dhintay Gaariza
ALLAHA u raxmadee, wariye Maxamuud Cabdiraxmaan Beene-Beene oo ka mid ahaa wariyeyaashii ka howlgeli jiray warbaahinta dalka, balse sannadihii ugu dambeeyay ku noolaa dalka Kenya ayaa xanuun awgiis xalay ugu geeriyooday magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi-bari ee dalka Kenya.
Gaari ku qarxay meel u dhow xarrunta Baarlamaanka oo uu qof ku dhintay
Sagal Radio Services • News Report • November 7, 2012
Hal ruux ayaa inta la xaqiijiyay ku dhintay mid kalena wuu ku dhaawacmay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay goob ay gawaaridu dhigtaan xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya marka ay ku kulmayaan xarruntooda golaha shacabka ee Muqdisho.
Wariye caawa dhaawac ugu geeriyoodey Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • October 28, 2012
ALLAHA u raxmade caawa waxa magaalada Muqdisho ku dhintey wariye Maxamed Maxuud Tuuryare, oo 21-kii bishan kooxo hubeysan ku dhaawaceen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, mar uu ka soo baxay masjid degmada ku yaalla oo uu salaad ku soo dukaday.
Shil sababay dhimashada iyo dhaawaca laba Masuul iyo Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlay
Allaah ha u naxariistee Guddoomiye ku-xigeenkii saddexaad ee Urur-siyaasadeedka WADDANI Cabdillaahi Siciid Dheere, ayaa galabta geeriyooday, Xildhibaan Cali Xaaji Maxamed oo golaha Wakiillada ka tirsanna waxa soo gaadhay dhaawac culus, ka dib markii uu la geddoomay gaadhi Laangaruusal Baraado ah oo ay wateen.